Archives tag: playstation 5
Dom » Entries tagged misy "playstation 5"
PlayStation 5 hiverina ao amin'ny Allegro. Jereo ny vidin'ny sety!
Fotoana iray hafa hividianana console PlayStation 5! Raha mbola tsy nividy ny console nofinofisinao ianao dia ity misy fotoana hafa. Ny fitaovana dia efa niseho tamin'ny onja taloha tao amin'ny Media Expert, Amazon, ...
Mbola mihaza ny PlayStation 5? Neonet dia manolotra tolotra tsara ho anao!
18 Martsa 2021
hampionona, playstation 5, ps5
Vao tsy ela akory izay, nisy tolotra iray hafa niseho ho an'ireo mpankafy PlayStation 5 izay matotra amin'ny fividianana io console io. Ny tsena hatramin'ny niandohan'ny premiere dia manana olana lehibe amin'ny fisian'ny PS5, ka izany no mahatonga ny karazana tsirairay ...
Cyberpunk 2077 - mifikitra amin'ny sehatra farany (Famerenana)
Cyberpunk, cyberpunk 2077, console lalao, playstation 5, ps5
Betsaka, tena maro ny hevitra Cyberpunk 2077. Tsy mijery lalao amin'ny SmartMe izahay ary tsy azo ovaina izany, fa Cyberpunk no haningana. Niandry an'ity lalao poloney ity nandritra ny taona maro izahay, ary Paweł, miaraka amin'ny tsanganany momba ny Gothic, ...
PlayStation VR 2 nanambara. Premiere amin'ny herintaona faran'ny voalohany
Efatra taona mahery izay no lasa hatramin'ny premiere ny rafitra virtoaly virtoaly voalohany avy any Sony. Ny mpanamboatra Japoney dia nanambara ny mpandimby azy, PlayStation VR 2. Ny taranaka farany an'ny rafitra VR, mazava ho azy, dia natao hiara-miasa amin'ny console PlayStation 5 ...
Neonet dia manolotra vidiny lafo ho an'ny console PS5. Fitaovana manaitra!
22 Febroary 2021
neonet, PlayStation, playstation 5, fisondrotana
Ny Playstation 5 console dia azo alaina ao amin'ny magazay Neonet indray. Ny rojo dia nametraka kitapo PS5 iray amidy, nefa amin'ny vidiny tsara dia tsara. Ho fanampin'ny console mihitsy, ny set dia misy lalao roa ihany koa. PS5 sanda lehibe ...